नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ: डा. केसी निस्वार्थी सत्याग्रही हुनुहुन्छ…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौ : सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीको पक्षमा उभिएका छन् । सरकार र केसीका प्रतिनिधिबीच शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता जारी रहेका बेला उनले केसीको स त्याग्र हको समर्थन गर्दै उनको माग पूरा गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
केसीकै अनसनका कारण चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै सुधारका काम भएको भन्दै श्रेष्ठले केसी निस्वा र्थी स त्याग्र ही रहेको भन्दै उनको प्रशंसा गरेका छन् । उनले बेलैमा केसीको माग पूरा गर्न सरकार लाग्नुपर्ने भए पनि बुधबार मात्रै वार्ता टोली गठन भएको भन्दै सकारात्मक नि ष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
श्रेष्ठले बिहीबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै केसीको माग पूरा गर्न जोड दिएका हुन् । उनले लेखेका छन्– डा. गोविन्द केसी १९ औं अनशनको २५ औं दिनमा हुनुहुन्छ। डा.केसीसँग कैयौँ बिषयमा असहमति हुन सक्ला र छन् पनि ।सबै मिलेर कोरोनाको बि रुध्द जुझ्नुपर्ने बेलामा यसपटक अनशनको समयका बारेमा सोच्नुपर्थ्यो भन्ने पनि धेरैलाई लागेकै छ।
तर के कुरामा शंका छैन भने उहाँ नि स्वार्थी स त्याग्र ही हुनुहुन्छ। उहाँको स त्याग्र हको बलमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा महत्वपुर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् र त्यो सबै नेपालीका लागि खुसीको कुरा हो। उहाँको जीवन महत्वपुर्ण छ र यतिबेला सरकार, उहाँ स्वयं र हामी सबैले
उहाँको जीवनरक्षामा ध्यान दिनु पर्दछ। यस सन्दर्भमा सरकारले हिजो डा. केसीसँग वार्ताका लागि वार्ता टोली गठन गरेर सकारात्मक पहल गरेको छ। आशा गरौं, छिट्टै सकारात्मक निष्क र्षमा पुगिनेछ । समाधान हुनेछ ।
Previous डा. गोविन्द केसीकी आमा भन्छिन : मैले मेरो छोरा देश र जनताका लागि समर्पण गरे…पूरा पढी सेयर गर्नुहोस् ।
Next मन्त्री ज्ञवाली भन्नुहुन्छ : शिक्षित युवा र बलिया युवा रोजगारको नाममा विदेश जान बाध्य छन्, यसलाई रोक्नुपर्छ…हेर्नुहोस् ।